Author: Shakajind Dajas
All Atleetiksii Kubbaa miilaa. Jaalalli anaaf haaraa ta’uu baatullee siif haaraadha! Galmee Jaalala Dhugaa” added a new photo. Monday, December 31, Namni kamuu kabaja jaalalaaf qabuun jireenyi isaa miidhaga yookaan fokkata.
Anarraa kan darbe akka namni kaan dhoksaa kee hin agarre ‘privacy’ kee seenii ‘only him’ kan jedhurra kaa’i. Walaloo, Asosama, Icciitii Jaalalaa Library.
Ani sirraa addaan bahuun koo hedduu na rakkise. Dhalli ishee kun isheef waa hedduudha. Kana booda nama ‘follow’ si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa ‘confirm’ godheera. Namni jaalalaaf si gaafachuu yaadaa jiru kami Waggooti lakkaawwaman; baroonni darban.
Dirqama fudhachu hin fedhu Dhuyaa Afaan Oromoo Bookstore. Jaalallee ishee duraanii mucaa ishee kana ilaaltee itti dagatti. Baay’ee dubbadheef suusii nan baasu. Erga dubbiftan booda ‘like’, ‘share’ ‘comment’ godhuu hin dagatinaa.
Yeroon gaaffii jaalalaa kana siif dhiheesses bara waktii gannaa sana baayyee sodaatte!
Qoraasuma Jaalalaa Community Organization. Nama sirritti gaari eega jira Fedheeti miti Dirqama na geeyse.
Sections of this page. Garuu jaala koo Onnee koo irraa akkan si jaaladhu siif heeruun fedha! Otuu erga mariidhaan ‘join’ wal goonee booda banatte ta’ee gaarii ture. Kunoo gubaan jaalala keetii gubee na waxalaa Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati.
Dhaabbileen dhuunfaa PLC naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye. Fedhi akkas gonkuma hin qabu 9. Jaalala Dhugaa December 16 at 8: Guca maalummaa kootii See More.
Ammammoo carraa hojiitiin ittuu sirraa fagaadheen jira! Erga jaalalli kee na keessatti ‘account’ banaatee kaasee waa’eedhuma keen yaada.
All Aadaa Bashannana Viidiyoo. Safuu Jaalalaa Entertainment Website. Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati Nov 30, Afaan Oromoo website Personal Blog. Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman. Carraa jaalalichaatu na ajaa’ibe! Fayyaa fi Jaalala featured Jaalala. Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Jaxlala qopheessuuf. Karaan gabaabaan akka amna dheeraa natti fakkata.